Dhacdo.com - News: Maxaad Ka Taqaanaa Kuliyadaha ay Bixiso Jaamacadda Kuis ee Dalka Malaysia, Warbixin Kooban oo Laga Diyaariyey (Daawo Sawirada)
14,886,878 unique visits
Maxaad Ka Taqaanaa Kuliyadaha ay Bixiso Jaamacadda Kuis ee Dalka Malaysia, Warbixin Kooban oo Laga Diyaariyey (Daawo Sawirada)
Kuis University College waxay ku taalla magaaladda Shah Alam ee gobolka Selangor. Jaamacadda waxay u jirtaa magaaladda caasimadda ah ee Kula Lumpur in yar 30 daqiiqo.
Xilliyadii ugu danbeeyey jaamacadaan waxa kusoo badanayey Arday badan oo iskugu jira Soomaali iyo Ajaaniib. Jaamacadda waxay bixisaa qeybaha kala duwan ee barasho. Balse waxay ku caan baxday kuliyadahaan sida:- qeybaha kala ee Management:- Business, Human Resources, accounting, Islamic Banking,sida luqadaha Arabic iyo English, Translation, Nursing, iyo dhamaan qeybaha kala duwan ee Barashada Diinta Islaam-ka sida, Xifdinta Qur’aanka Kariimka, sidoo kale heerarka waxbarasho ee Jaamacadda ayaa wuxu gaaarsiisan yihiin sida, Diploma, Degree iyo Master.
Jaamacadda waxay lee-dahay guryo u gaar ah oo ay ugu tala gashay Arayda wax ka dhigata. Dhanka kale qiimaha waxbarashada ayaa ah mid macquul ah.
Waxaa ii suurto gashay inaan wareysi la-yeesho gudoomiyaha Ardayda Soomaaliyadeed ee Jaamacadda Kuis Mudane Ayaanle Maxamuud Salaad. Ugu horeyna waxaan wax ka weydiiyey tirada Ardayda Soomaaliyadeed ee Jaamacadaan wax ka dhigta, wuxuuna i sheegay ku dhawaad 45 Arday oo Soomaali ah in ay hada wax ka dhigtaan.
Waxaan kaloo wax ka weydiiyey gudoomiyaha haddii ay jiraan cid dooneysa Jaamacadaan sharuudaha laga doonaayo waxa uu yahay. Wuxuuse i sheegay in laga doonaayo oo kaliya, 1-Shahaadada Dugsiga Sare oo Copy ah, 2-dhamaan Basaboorka oo Copy ah, 3- iyo 4 xabo oo sawiro ah. xareenta jaamacadda waa lacag la’aan.
Jaamacadda waxay Ardayda qaadataa sanadkiiba laba jeer, Bilaha May iyo November balse gudoomiyaha wuxu i sheegay xareenta jaamacadda mar walba in’ay furan tahay.
Ugu danbeen Ardayda Jaamacadaan wax ka barata ayaa waxay u kala dhasheen dalalkaan:- Somalia, Sudan, Uganda, Ethiopia, Chad, Nageria, China, Muritious, Maldives, India, Philipine, Albania, Singapore, Burunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, Combodia iyo Iraq.
laacib143@hotmail.com Wixii macluumaad intaas dheer kala xiriir Mudane Maxamed Suubiye 0060173104037 E-mail: msuubiye@hotmail.com
Laacib on March 01 2010 14:41:52 ·
0 Comments · 15320 Reads